Clooney, George, George Clooney, jilaa
George Timothy Clooney(* 6. 1961 May Lexington, Kentucky) waa jilaa American, agaasimaha film, soo saare iyo sameeyay, ina idaaciga TV Nick Clooneho oo adeer u ah oo gabayaa Rosemary Clooney oo actor Jose Ferrer.
Bandhigyada muuqaalku waxay keeneen saddex Golden Globes. Waxa kale oo uu helay laba Oscars - mid ka mid ah doorka ugu fiican ee taageerada filimkaSyrianaiyo kan kale ee waxqabadka wax soosaaraya (oo la socdo Affleck iyo Hesel) oo ku soo boodayaArgo, oo ku guuleystay category Best Film. Taariikhda Abaalmarinta Abaalmarinta, wuxuu u taagan yahay fanaan kaliya oo lagu soo xulay lix qaybood oo kala duwan.
Waxaa loo yaqaanaa dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed. Laga soo bilaabo 31. Janaayo 2008 Abriil 2014wuxuu u adeegay sarkaalka nabada ee Qaramada Midoobay.Howlaha bani'aadamnimada ee Herku ayaa waxaa ka mid ahaa dadaallo lagu xallinayo khilaafka ka jira Darfur, oo ay wadaagaan dhaqaale si loogu taageero dhibbanayaasha weerarrada argagixisada ee 11. Sebtembar 2001, 2004 Badweynta Hindiya Tsunami, iyo dhulgariirkii Haiti 2010, halkaas oo uu soo qabanqaabiyey rajada Haiti hadda. Si kor loogu qaado wacyiga dhibaatooyinka caalamiga ah, wuxuu sameeyay documentarySand iyo Sorrow. Waxa kale oo ku jira xubno ka tirsan Golaha Xiriirada Dibadda, Ururada Samafalka ah ee Maraykanka iyo kuwa Fikradaha kuwaas oo ka mid ah waxyaabo kale,Arimaha Dibadda.
Majaladda telefishankaTV Guidejilayaasha 2005 ayaa ku guuleystay 1. halkii "50 xiddigaha ugu caansan ee waqtiga oo dhan".Clooney wuxuu ka muuqdaa liiska ugu muhiimsan ee shakhsiyaadka rafcaanka.
Wuxuu ku dhashay 1961 oo ku taala Lexington, Kentucky, bishii May.Hooyo Nina Bruce (dhashay Warren, oo dhashay 1939)waa boqoradda hore ee quruxda. Aabaha Nick Clooney wuxuu u shaqeeyay sidii uu uqaabilsan yahay telefishanka American Movie Classics. Xuduudaha Clooney waxay u tagaan Irland, Jarmalka, Ingriiska iyo xitaa aabayaashood oo aad u dheer oo ku nool Scotland iyo Nederland.Waalidkiisa soddog, Nicholas Clooney (ee Kilkenny County) iyo Bridget Byron, waxay u haajireen Mareykanka ka yimid Ireland.dib afar fac weheliyaan line uu awoowe, hooyadiisna waxay ahayd Mary Ann Sparrow, nus-walaashiis Nancy Hanks, kuwaas oo wiilkiisiina wuxuu ahaa Abraham Madaxweynaha Maraykanka Jamhuuriga ee Lincoln ugu horeysay.
Clooney oo ka hadlay Beerta Aqalka Cad iyo Madaxwaynaha Barack Obama ee ku saabsan Darfur Colaad, October 2010
Jiluhu wuxuu qabaa walaashii Adelia. adeer waxaa ka mid ah jilayaasha Miguel iyo Rafael Ferrer, kuwaas oo wiilashiisii, abtiyaashay iyo Fanaanada Rosemary Clooney, iyo adeerkiis, actor Jose Ferrer. Xiriirka ayaa sidoo kale lala xiriirin karo oo gabayaa ahaa Debby Boone, oo guursadaan abti jilaa Gabriel Ferrera (ina José Ferrer iyo Rosemary Clooney).
Clooney waxaa loo keenay rumaysad adag oo Roomaan ah.Waxa uu dugsiga ka bartay Dugsiga Sacuudiga ee Fort Mitchell, Kentucky. Wuxuu ku qaatay qaar ka mid ah caruurnimadiisa Ohio, halkaas oo uu ku biiray St. Colombia. Iskuulka Michael, kadibna udhexeeya 1968-1974 iyo Dugsiga Hoose ee West Row iyo St. Dugsiga Susanna ee Ohio Mason. Waqtiga fasalka toddobaad, qoysku waxay ku noqdeen Kentucky.
George Clooney bishii Janaayo 2012
Dugsiga Sare ee Dugsiga Dhexe, Baadhista Dabaysha ee Bell, ayaa saameeya guntimaha sare iyo hoose ee dareemaha wajiga dhinaciisa wajigiisa. Daaweynta ayaa dhacday hal sano gudaheed. Wareysiga loogu talagalay xusuus qorkaDaily MirrorApril 2003 ayaa yiri: "Waxay ahayd markii ugu xumayd noloshayda. Waad ogtahay sida carruurtu u noqon karto mid naxariis leh. Waxan noqday khasaare, laakiin waayo-aragnimadan ayaa i xoojisay".
Kadib markii waalidkii u soo guuray Kentucky Augusta, wuxuu bilaabay inuu wax ka barto Dugsiga Sare ee Augusta. Sida laga soo xigtay faallooyinka aktarada, wuxuu ka kooban yahay dhammaan imtixaannada fasalka A ama B.Wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda baseball iyo kubbadda kolayga. 1977, wuxuu isku dayay inuu dhexgalo kooxda kubada cagta ee Cincinnati Reds oo uu la ciyaaray, lakiin ma helin qandaraas qandaraas. Tani waxaa la cirib tiray wareega koowaad ee kooxda.
Sanadihii 1979-1981, wuxuu noqday arday ka tirsan Jaamacadda Waqooyiga Kentucky, halkaas oo uu ku barto mawduuca ugu wayn ee suxufiyiinta. Waxa kale oo uu si kooban uqaatay Jaamacadda Cincinnati, laakiin midna kama mid aha jaamacadaha.Mararka qaar, wuxuu lacag ka dhigay iibinta dharka ragga iyo jarista tubaakada.
1: Spy Kids 3-D: Dhamaan ciyaarta
2: Rajada Haiti Hadda
3: Midba midka kale u dhow
4: Kadib markaad wax gubato
5: 72. Abaalmarinta Abaalmarinta Golden Globe
7: Xayawaanka Habeenka (Movie)
8: Danny saaxiibadiisa
9: Suburbicon: xaafad madow
10: Walaaley, xagee tahay?
11: 79. Oscars
12: Dhimashadu ma yeelan doonto xukun
13: Ciidamada nabad ilaalinta ee QM
15: Gurmad Degdeg ah (taxane)
16: Aqoonsi Maarso
17: Culays (Muuqaal)
20: Habeen wanaagsan iyo nasiib wacan
21: 2002 ee filimka
22: Siddeedda Siddeedaad
23: Madxafka Madam Madame Tussaud
24: Globe Golden For Actress (Mustaqbalka / Musikada)
26: 1961 ee filimka
27: Qiimaha Cecile B. DeMilla
29: Abbaar dahab ah oo loogu talagalay Jilidda Taageerada Wanaagsan
30: Saddex boodh oo ka danbeeya Ebbing
32: 82. Oscars
36: Dahabiga Dahabiga ah ee loogu tala galay Lamaanaha ugu wanaagsan (Drama)
37: Liiska Farshaxanka ee Amarka Farshaxanka iyo suugaanta
39: Globe Golden ee loogu talagalay Screenplay Best
42: Jacaylkaaga dila
43: Lammaanaha Danny ee 2
44: Lammaanaha Danny ee 3
45: Warbixinta Hollywood-ka
46: Wanaagsan Mr. Lišák
47: 69. Abaalmarinta Abaalmarinta Golden Globe
48: Batman iyo Robin
George Clooney Timoty (* 6 1961. May Lexington, Kentucky) waa jilaa American, agaasimaha film, soo saare iyo sameeyay, ina idaaciga TV Nick Clooneho oo adeer u ah oo gabayaa Rosemary Clooney oo actor Jose Ferrer.
Spy Kids 3-D: Game In ka badan waa in la sii wado filimka Spy Kids in Action iyo 2 Spy Kids: Island of Lost snů.Tentokrát ma matalaan kaalin weyn ka Carmen laakiin walaalkeed juni Juni.PříběhMladý shaqeeya in uu hay'adda Baare u gaar ah, sidaas darteed wuxuu yaabaa cusub a ciyaarta ciyaarta online ka badan, abuuray Hračkář (Sylvester Stallone). OSS iska dhega call caawinaad, maxaa yeelay, wuxuu ahaa wakiilka ugu fiican. Laakiin ugu dhakhsaha badan uu ku magacaabay Madaxweynaha Maraykanka (George Clooney) oo isaga sheegayaa in walaashiis Carmen waayay. Juni aqbalay inay galaan dunida dalwaddii ee ciyaarta galay oo soo baabbi'i laba iyo toban saacadood gudahood. Waa inuu galaa shan heer oo xulo xoojinta. Waxa uu doorto uu awoowe, kuwaas oo lahaa khilaafaadka iyadoo Hračkářem oo uu doonayo si ay ugu aargudaan, laakiin Juny og. On habka ay u burburinta dad cusub: Reze, Arnold iyo Francis, kuwaas oo u maleeyo inuu superhráč waa. Juni ku yaalla gabar qurux badan u Arena Demetri bal yaa isaga u lahaa in allabaryo 3 heer. 4. Heerkuna wuxuu la kulmaa Carmen waxayna ku socdaan. Dhinaca kale, inta kale ee OSS ka ogaado runta ku saabsan Hračkáři, oo sidaas isku dayaan in ay wada baabbi'in carruurta iyo iyaga oo ka ciyaarta guuraan inkasta oo ay dunida oo cambaareeyay si ay u baabba'aan. Juni badan caqabado OSS galaa 5. heerka iyo ka baxsiga ciyaarta. Waxaa la wada baabbi'iyey, laakiin Hračkář baxsaday iyo dunida soo bandhigay in dagaalka 3D. In kasta oo wacaya wakiilada oo dhan waa in ay awoowe la hračkářem keli qaban.
Ku kalsoonow, waayo, Haiti Hadda: A Benefit Caalamiga ah Dhulgariirka Relief ahaa riwaayad lacagta ah si ay u caawiyaan dhibbanayaasha dhulgariirkii ka dhacay Haiti, lagu qabtay 23. January 2010 laga bilaabo wakhtiga 1: 00 in 3: saacadood 00 UTC, taasoo kasbaday intii lagu gudbiyo labaatan million pounds iyo hadiyado kale ayaa la ordaya on account iyo ka dib. Sokoeye iyo barnaamijka loo aqoonsado "Teleton" (farcan ah marathon television a) wuxuu ahaa actor George Clooney oo goob joog ka ahaa in ka badan xiddiga caalamiga ah 100.
Midba midka kale (magaca asalka ah ee bisha Agosto: Osage County) waa filimka Mareykanka iyo filimka 2013, oo ku saleysan abaalmarinta abaalmarinta abaalmarinta Pulitzer Prize August: Gobolka Osage. Sawir gacmeedka John Wells wuxuu ka mid ahaa kuwa wax soo saarka ah sida George Clooney, Jean Doumanian, Grant Heslov, Steve Traxler, Bob Weinstein iyo Harvey Weinstein. Bandhigga ayaa ahaa 9. Sebtembar 2013 oo ka socday Festival Film Festival
Gubashada ka dib Akhriska waa filim Maraykan ah oo ka mid ah walaalaha Coen oo ka socda 2008. George Clooney, John Malkovich, Frances McDormand, Tilda Swinton, Richard Jenkins iyo Brad Pitt ayaa door muhiim ah ka ciyaaray.
Abaalmarinta Golden Globe Sanadka ayaa waxaa qabtay 11. Janaayo 2015 ee Beverly Hilton Hotel ee Beverly Hills, Los Angeles. Gala markii seddexaad ayaa waxaa u dhexeeyay laba gabdhood oo jilicsan oo Tin Fey iyo Amy Poehler. Ururka Hollywood ee Ururka Saxafiyiinta Dibadda ayaa ku dhawaaqay magacaabista 11. Diisambar 2014. Miss Golden Globe waxay gashay gabadha dahabka ah ee dahabiga ah iyo Frasier Kelsey Gramer Greer Grammer. Abaalmarinta Cecil B. DeMilla ee Nolosha Lifetime ee Warshadda Filimaanta waxaa ku guuleystay Agaasimaha, soo saaraha, Sawir gacmeedka iyo actor George Clooney.
Miguel Ferrer (. 7 1955 February Santa Monica, California -. 19 2017 January ee Los Angeles) ahaa herec.Život Maraykan ah ku dhashay sidii ahaa curadkii Jose Ferrer iyo Rosemary Clooney. Adeerkiis waa George Clooney. Wuxuu ku koray oo wax ka bartay Beverly Hills. Waxa uu sameeyay filimkiisii ​​ugu horeeyay, ninka aan joogin, wuxuuna ka soo muuqday Star Trek III: Baadigoobka Manida (1983). In sano ee ku xiga, wuxuu helay kaalin weyn, sidaas darteed ka mid ah filimada uu ugu caansan waxaa ka mid ah Robocop, Shots Hot 1984 iyo Traffic - gangs Dominion.
xayawaanka nocturnal (in nocturnal Ingiriisi ah Xayawaanka asalka ah) waa baxday Maraykanka nafsi ah oo 2016 sanadka. Tom Diray Tom Ford. Filimka waxaa soo saaray Austin Wright's Tony iyo Susan. Doorka ugu weyn ee ka ciyaaray by Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Laura Linney, Andrea Riseborough iyo Michael Sheen.
Danny's Friends (magaca asalka ah ee Ocean's Eleven) waa filim Maraykan ah oo ka socda 2001. Waa dib-u-dajin Danny Eleven oo ka socda 1960. Agaasimaha Steven Soderbergh waa George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia iyo Julia Roberts. Filimku wuxuu ahaa guul weyn oo aan ahayn dhaqaale ahaan laakiin sidoo kale naqdin. Steven Soderbergh ayaa ku hogaamiyay laba qaybood, filimadii Danny's 2 partner 2004 iyo Danny's 3 ee xNUMX.
Suburbicon: Suburbonka madow (Ingiriis suburbicon) waa filimka Maraykanka ee Comedy Comedy from 2017. Waxa ku hogaaminayey George Clooney, oo ku salaysan dhacdo halkaasoo walaalaha Coen iyo Grant Haslov ay sidoo kale gacan ka geysteen. Matt Damon, Julianne Moore iyo Oscar Isaac.
Walaaley, xagee baad tahay? (Ingiriisi O Walaalow, Xaggee baad joogtaa? 2000) waa film dambi American ah 2001 sanadka. Tani waa gabal kale oo ka timid shaqsiyaadka filimka caanka ah Joel Coen iyo Ethan Coen. Filimku wuxuu ku saleysan yahay sheekada gabaygii hore ee Giriiga Odyssey ee gabayga Giriiga ah ee Homer. Waxa uu sheegay in sheekada saddex dembiilayaal (Everett, Pete iyo Delmar), kuwaas oo, ka dib markii xabsigii ka baxsadeen, si ay meesha ka socday, halkaas oo mid ka mid ah (Everett, ciyaaray by George Clooney) ka hor inta aan xabsi lagu aasay khasnaddiisa. In filimka, in dareen sarbeebta ah ogaada characters badan oo u waxyoonay by gabayo qadiimiga ah, laakiin wakhtiyada-awaalka ah Baydka Greece aan lahaa, laakiin American Southwest Mississippi ee times of 30 xiisadda dhaqaale. sano.
Oscars waxaa lagu qabtay Masraxa Codak ee Los Angeles 25. Febraayo 2007. Abaalmarinta waxay ka bilowdey 5.30 maxali ah iyo dhowr saacadood gudahood Akademiyada Muuqaalka Sawirka Farshaxanka iyo Sayniska waxay abaalmarin ku siisay qaybaha 24. Kooxda martida loo yahay waxay ahayd Ellen DeGeneres, oo markii ugu horeysay la siiyay fursadan. Filimka ugu qadarsan wuxuu ahaa Martin Scorsese's Secret Identity, wadar ahaan afar abaalmarin. Taa bedelkeeda, ugu caansan ayaa ahaa Dreamgirls - wadar ahaan siddeed. Magacyo badan ayaa ku guuleystay Babel.
"Dhimashadu ma lahaan doonto xukun" waa gabayo dimoqraadiga Welishka Dylan Thomas. Magaca gabaygan wuxuu ka yimid Letter to Rooma, oo ah qayb ka mid ah Axdiga Cusub. Waxay markii ugu horreysay ka muuqatay 1933 mawduucii Maajo ee Isbuucii Ingiriisi Cusub. Bishii Sebtembar 1936 waxay soo saartey gabay gabaldhowrka shanaad ee shanaad. Jilaaga George Clooney wuxuu soo akhriyay qayb ka mid ah gabayada ee 2002 ee filimka Solaris. Muusikada reer galbeedka iyo muusigga John Cale ayaa gabaygani ku soo bandhigay 2016 xafladiisa oo kuyaal Cardiff, Michael Sheen wuxuu akhriyay.
UN Messengers of Peace (English United Nations Messengers of Peace) waa horyaalka abaal by Qaramada Midoobay "shaqsiyaad aad u fiican, si taxadar leh loo doortay ka soo beerihii farshaxanka, music, suugaanta iyo ciyaaraha kuwaas oo isku raacay in la caawiyo diiradda dareenka caalamka oo ku saabsan shaqada ee Qaramada Midoobay".
Ave, Kaysar! (Original Ingiriisi Nabad, Kaysar baa leh!) Ma filim British-American majaajilada ee sannadka 2016, kuwaas oo ku qoray, soo saaray, oo si toos ah sheared Coenové.Ve Brothers, bilowday Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson , Frances McDormand, Tilda Swinton, iyo Channing Tatum. Filimka waa sheeko dhab ahayn in uu noqdo qofka dhab ah, iyo in Eddie Mannix, oo ka shaqeeya warshadaha ee filimka Hollywood ee konton konton ah oo isku day in aad xalliso xaalad actor weyn ee la waayay intii uu socday filim.
Xaalad Degdeg ah (Ingiriisi ER) waa taxane telefishan oo muusikada ah oo ku yaalla deegaan caafimaad oo ay sameeyeen qoraa, muusig iyo sawir-qaade Michael Crichton. Markii ugu horeysay ee 19 ku muuqatay shaashado TV ah. Sebtembar 1994 ee telefishanka Maraykanka ee NBC. Sheekadu waxay inta badan ka dhacdaa waaxda xaaladaha degdegga ah ee cisbitaallada khiyaaliga ah ee Cook County, Chicago. Taxanaha waxaa soo saaray Ceegaas Productions iyo Amblin Entertainment iyadoo lala kaashanayo Warner Bros. Soo saarida Telefishin, Inc.
Ides ee March iyo The Ides of March noqon kartaa: ka Ides of March (English Ides of March) - maalinta A ee jadwalka Roman dhiganta 15. březnuDen khiyaanay (ee asalka Ingiriiska ayaa Ides of March) - Filimku wuxuu, kaas oo la faray by George Clooney (2011) Ides of March (buug) (in asalka Ingiriisi The Ides of March) - novel ah by qoraaga American Thornton Wilder (1948) The Ides of March ( group) - kooxda muusikada "Ides of March" American - song of English band music Iron xaasnimada sii daayay dhinto album iyada ah (1971) - fannaaniin gabaygii John Cale iyo Terry Riley ay album Church of Anthrax (1981) "The Ides of March" soo saaray
Culeyska (Ingiriisi-ga Gravity) waa filim caan ah ee sayniska Maraykanku ku hayo Alfonso Cuaron ee 2013. Doorka ugu muhiimsan ee ka soo haray astronauts ka soo jiidashada burburay waxaa ku ciyaaray Sandra Bullock iyo George Clooney.
Charles Jerome "Jerry" Weintraub (26 1937 September, Brooklyn, New York -.. 6 2015 July, Santa Barbara, California) waxa uu ahaa tababarihii dhaqanka, horumariyaha riwaayad, filim iyo television soosaare Maraykan ah. Wuxuu sidoo kale ahaa madaxwaynaha farshaxanada ee United.
Cheryl Ann Fernandez-Versini (* 30 1983. June Newcastle dul Tyne, England, née Tweedy ka dib Cole) waa gabayaa Ingiriisi ah iyo xubin ka mid ah kooxda gabar British Girls Aloud. Wuxuu ku dhashay sida afaraad ee si ah shan walaalo (saddex walaalo ah iyo walaashay a). Waxay ahayd mid ka mid ah jaanisyada Ingiriiska ee X-Factor. Waxay lahayd xiddig caan ka ah Ashley Cola, oo is furtay 2010. Waxay mar kale xannibtay 7. July 2014 oo u dhashay Faransiiska Jean-Bernard Fernandez-Versini. Her hits ugu weyn waxay noqdeen baarashuudka, Halganka Love this, wac My Name, ama laga yaabee yabooha Tani
Habeen wanaagsan iyo nasiib wacan (in Night asalka Good, iyo nasiib wacan) waa filim madow American by Clooney George ee ka 2005 faray. Waxay ku salaysan tahay dhacdooyin dhab ah iyo xaaladda zaobývá in telefishanka CBS ee 50. sano 20. qarnigii, markii ugu yeedhay McCarthyism., ie. waqti ka mid ah anti-wadaag oo xooggan, taas oo dad badan oo Maraykan ah ayaa la maxkamadeeyaa eedaymo dheeraad ah ama run yar ee lala kaashanayo Midowga Soofiyeeti iyo / ama USA xisbiga shuuciga. Gaar ahaan, ayaa sheegay sheekada ee barnaamijka arrimaha hadda baaritaan Waxaa Arag Haddaba, iyo abuureyaal ay, Edward Roscoe Murrow, Fred Friendly iyo Joseph Wershby. Horyaalka film ee waxa laguu waxyooday by xukunka, kaas oo Edward R. Murrow soo noqnoqda dhamaadka show ah - "Night Good, iyo nasiib wacan", Czech "Habeen wanaagsan iyo nasiib wacan" ee. Filimka ayaa loo magacaabay lix Oscar, oo ay ku jiraan filimada ugu fiican Oscar, laakiin ma aha mid ka mid ah ma helin, laakiin lagu sharfay by Machadka American Film sida mid ka mid ah toban filimada ugu fiican ee sanadka, iyo sidoo kale Stanley Kramer Award.
Movies of movies 2002České Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg liiska Czech filimada # 2002.ABCDTOPOL (by Filip Remunda faray) Angel Waji (si toos ah by Zdenek Troška) Brak (si toos ah by Karel Spěváček) Fimfárum Jan Werich (si toos ah by Vlasta Pospíšilová iyo Aurel Klimt) Jan 69 (by Stanislav Milota faray) aroosadda cagahana weyn (ku faray Viktor Polesný) tuulada B (si toos ah by Filip Remunda) Year of Ibliiska (by Petr Zelenka faray) Brats (by Zdenek TyC faray) Trip (si toos ah by Alice Nellis) haweenka Dibadda filmy8 (si toos ah by François Ozon) habeynayo (si toos ah by Spike Jonze) Aqoonsiga Bourne The Asterix iyo Obelix (by Doug Liman faray): Howlgalka Cleopatra (si toos ah by Alain Chabat) Balto 2: Jidka Yeeyi ee (by Phil Weinstein si toos ah), masduulaagii Red (agaasimaha Brett Ratner) jidka dheer (film) (agaasimaha: Adam Shankman) dhinta Day kale (by Lee Tamahori faray) Age barafka (by Chris waslad iyo Carlos Saldanha faray) hoganaya (si toos ah by Kurt Wimmer) guddiga khubaarada iyo Fatale (si toos ah by Brian De Palma) Frida (si toos ah by Julie Taymor) Burcadda ah ee New York (si toos ah by Martin Scorsese) Harry Potter iyo Rugta Secrets (by Chris Columbus faray) War Hart ee (by Gregory Hoblit faray) Clock (by Stephen Daldry faray) Hero (Director: Zhang Yimou), Chicago (by Rob Marshall faray) Qabasho i haddii aad awoodid (si toos ah by Steven Spielberg) Interstate 60 (si toos ah by Bob Gale) K-19: Widowmaker The (si toos ah by Kathryn Bigelow) Cat xabbad canjeero ah (faray Hirujoki Morita) Windtalkers (si toos ah by John Woo) The Caqrabbiim King (si toos ah by Chuck Russell), Circle (si toos ah by Gore Verbinski) dhiig Axaddii (si toos ah by Paul Greengrass) Lilja (si toos ah by Lukas Moodysson) Qirashooyinkiisa of Mind ah khatarta ah (si toos ah by George Clooney) Report laga tirada badan yahay (si toos ah by Steven Spielberg) hadal iyadii (agaasimaha Pedro Almodóvar) My arooska Big baruurta Greek (by Joel Zwick faray) Snapshots (by Rudolf van den Berg faray) Man aan hore (by Aki Kaurismäki faray) Men in 2 madow (by Barry Sonnenfeld faray) Naqoyqatsi (by Godfrey Reggio faray) O Schmidt (by Alexander Payne faray) Sisters reer Magdala (by Peter Mullan faray) Eebaha siddooyinkii: The Laba Towers (agaasimaha Peter Jackson) biyaaniiste (by Roman Polanski faray) Sweetest Wax The (by Roger Kumble faray) Python 2 (agaasimaha: Lee McConnell) xayndaabka Bakayle-Caddaynta (Director: Phillip Noyce) bakaylaha (si toos ah by David Lynch) Xun Resident (si toos ah by Paul WS Anderson) Soo deg oo kaalay! (Maareeyay Charles Stone III) Xoghayaha (by Steven Shainberg faray) Spider-Man (si toos ah by Sam Raimi)
Siddeedda Siddeedaad waa jilaa filimka soo socda ee Maraykanka. Agaasimaha filimka waa Gary Ross. Filimku waa filim ka mid ah Danny haweeney filim haween ah, oo uu hoggaaminayey Sandra Bullock. Waxay sidoo kale ciyaari karaan Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling iyo Awkwafina Raffle. Taariikhda premier-ka ayaa lagu dhigay 8. Juun 2018.
Matxafka Madam Madame Tussaud waa matxafka jimicsiga ee caalamiga ah, oo fadhigeedu yahay London, oo leh laamo ku yaal Amsterdam, Hong Kong, Las Vegas iyo New York iyo Vienna. Waxaa la aasaasay Maria Tussaud, oo ah sawir qaade ah makhaayad wax lagu dhejiyo.
Abaalmarinta Dahabiga ee Jilayaasha ugu Fiican ee Comedy ama Musikada waxaa si joogta ah loo bixiyaa 1951 Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ee xafladda Golden Globes.
Jocelyn Quivrin (14 1979 February, Dijon, France -.. 15 2009 November, Saint-Cloud, France) ahaa Faransiis herec.Dětství iyo studiumNarodil ee Dijon, galay qoyska ka mid ah dhakhtar weyn. Wuxuu wax ka bartaa Dugsiga Hector Berlioz ee Vincennes ka dibna wuxuu ka qalinjabiyay filim iyo suugaan ku yaal Nanterre School. Muddo sanado ah ayuu ka shaqeynayay tiyaatarka, waxaana si joogta ah uga soo qayb galay fasalo jilicsan.
UdálostiArthur Miller iyo Marilyn Monroe rozvedli.Odpůrci faafreebka film ee dalka Mareykanka soo maray lama filaan ah markii Maxkamadda Sare ay xukmisay in xaq u leedahay in xoriyadda hadalka ma aysan ka horimaan, haddii ay soo gudbiyeen filimada cenzurnímu úřaduPrudce tirada hoos u filimada ku tixan, inta badan sababta oo ah dooda dadweynaha ee laga hadlin ee la soo dhaafay noqday on intenzitě.Wall Street Journal daabacay liiska dalalka la-soo-saarka ugu badan ee la asaasay, in 60. sano. Madaxa jstálo Japan (400 hindisaa sanadkiiba) iyo Hindiya (360 hindisaa sanadkiiba). Waxay la raacay by Turkey, Greece iyo Masar in Hindiya iyo sidoo kale filimada soo saaray ida ay suuqa gudaha. In dalalka film classic, USA, Italy iyo France, ayaa laga duubay oo ku saabsan a darbo 150 sano.
Golden DeMille Award B. Cecil Globe (English Cecil DeMille Award B.) la siiyo xaflad Golden fijaan ee sanad kasta Hollywood Dibadda Press Association (English Hollywood Dibadda Press Association, gaabiyay HFPA) ee guusha uu nool yahay filimka. Waxay ahayd mid la odhan jiray ka dib markii ay soo saare ah American iyo agaasimaha Cecil B. DeMille (1881 - 1959), oo sidoo kale noqday haystaha ugu horeysay.
Lean on Pete waa riwaayad British ah oo ka timid 2017, oo uu maamulo agaasimaha Andrew Haigh. Qoraalka, oo uu qoray Willy Vlautin ee buugga magaca isla, sidoo kale waa Haigh shaqadiisa. Charlie Thompson oo ka tirsanaa Charlie Plummer. Doorarka kale waxaa ka mid ah Chloe Sevigny, Travis Fimmel iyo Steve Buscemi.
Golden Globe Award for Best Actor ee Doorka gargaara abaalmariyey markii ugu horeysay ee January 1944 Hollywood Dibadda Press Association (Eng. Hollywood Press Association Dibadda HFPA gaabinta) xaflada Golden fijaan.
Saddex boodh oo ka dambeeya Ebbing (oo ah Ingiriis Saddex Billboards oo ka baxsan bannaanka Ebbing, Missouri) waa filim muusiga Mareykanka ah oo ka socda 2017. Waxaa maamula Martin McDonagh. Doorka hogaaminta waxaa ka mid ah Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes iyo Peter Dinklage. Filimka waxaa lagu soo bandhigay Festival Venice Film iyo Toronto International Film Festival, halkaas oo ay ku guulaysatay abaalmarinta dhagaystayaasha. 10 waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigay filimada. November 2017. Dalka Jamhuuriyadda Czech waxaa lagu hormarin doonaa 15. Febraayo 2018.
John Burke Krasinski (* 20 Oktoobar 1979, Newton, Massachusetts, USA) waa actor Maraykan ah, Agaasime iyo Qorshe sawirqaade. Waxa uu u muuqday tusaale ahaan. In filimada License si Wed, waa ay adag tahay, Naga fogeeya Waxaan u tag, oo codkiisana dabeecadda Lancelot in filimka Shrek Saddexaad deymin, laakiin dadka ugu weyn isaga kasbadeen doorka Jim Halpert xafiiska taxanaha ah.
Xaflada 82. Oscars waxaa la siiyay 7. Maarso 2010. Filimka Dhimirka waa filimka ugu fiican ee meel kasta oo ku guuleystay wadarta dahab dahabka ah ee 6. Filimyada ugu sharraxan waxay ahaayeen "Dhimasho" iyo "Avatar" (9).
Chuck Israels (* 10 August August 1936) waa ciyaaryahan Mareykan ah oo lagu yaqaan jazz baseball. Waxa uu ku dhashay New York City si ay u noqoto qoyska muusikada. Maaddaama 1959 uu xubin ka ahaa sextet George Russell. Sannadihii 1961 ee 1966 wuxuu fuliyay oo loo diiwaan geliyey inuu yahay xubin ka mid ah saddexda nin ee baanka pianist Bill Evans. Later, wuxuu la shaqeeyay fanaaniin kale oo badan oo ay ku jiraan Rosemary Clooney, Herbie Hancock, Judy Collins, iyo Patti Austin. 1997 wuxuu albaabka ku duubay albumka Orchestra ee orkestestra Orkest.
Andrew Steven Soderbergh (* 14 1963. January Atlanta, Georgia) waa agaasimaha film Maraykan ah, filimka, sameeyay, editor, soo saare, iyo (gaar ahaan filimada uu) sidoo kale waa actor marmar ah. Waa xNUMX m.
Rai 3 waa barnaamij saddexaad ee telefishanka dadweynaha Talyaani Rai.CharakteristikaRai 3 waxaa loogu talagalay gaar ahaan dalbanayaan daawadayaasha iyo sii daayaa inta badan arrimaha taagan, shows hadal, isboortiga (talantaalli ah Rai Sport), Filimadan taariikhda dabiiciga ah iyo filimaan loogu talagalay dad culus. movies Hollywood, taxanaha TV ama xaqiiqada show laga reebo tartanka. Barnaamijku wuxuu Yeela xooga adag oo ku saabsan dhacdooyinka siyaasadeed ee Italy iyo adduunka. channel The baahiyaa free ka satellite Hot Bird.
Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Dahabiga ee Abaalmarinta Caalamiga Ah Qeybta asalka ah waxaa loo magacaabay Actor Best and waxaana la siiyey tan iyo 1943. 1950, shuruucda ayaa isbeddelay iyo qaybta labaaadna waxay noqdeen - Jilayaasha ugu Fiican ee riwaayadda iyo jilayaasha ugu fiican ee jilista / muusikada.
Liiska aan dhamaystirnayn oo heysata Order of Arts iyo Suugaanta Faransiis republikyČeští xammaalladii Commandeur des Arts et LettresVáclav Havel - Abwaan iyo madaxweynihii hore ee Czechoslovakia iyo Czech Republic (2001) Officier des Arts et LettresBohumil Hrabal - spisovatelChevalier des Arts et LettresAdolf dhashay - rinjiile Czech iyo grafikVáclav Boštík - Czech malířPetr Ebenceser - laxamiistaha Czech iyo varhaníkAnna Fárová - taariikhyahan tahay Czech-Faransiis iyo překladatelkaHana Hegerová - atariishada Czech iyo šansoniérkaMagdalena Leather - opera Czech pěvkyněRadoslav Kvapil - Czech klavíristaJiří Menzel - film Czech iyo tiyaatarka režisérJan Saudek - Czech fotografBořek Sipek - dhise Czech iyo designérJan Vladislav - Abwaan Czech iyo překladatelEva Zaoralová - Czech sidayna publicistkaZahraniční film of des Commandeur Arts et LettresDirk Bogarde - actor Ingiriisi (1990) Bono - Fanaanada hogaanka of Irish Skupi ny U2 (2013) David Bowie - Fanaanada Ingiriisi iyo Xisbi (1999) Ray Bradbury - qoraaga American (2007) Sean Connery - actor Scottish (1987) Bob Dylan - Fanaanada American (1990) Clint Eastwood - actor American (1994) Audrey Hepburn - atariishada British iyo Safiirka ee UNICEF (1987) Jean-Marie Klinkenberg - nin afaf ka barto Belgian iyo semiotician (2010) Emir Kusturica - agaasimaha film Serbian (2007) Roger Moore - actor British (2008) Joaquín Rodrigo - laxamiistaha Spanish (1998) Ringo Starr - muusikiiste Ingiriisi xubin ka mid ah Beatles (2013) Meryl Streep The - atariishada American (2003) Donald Sutherland - actor ee Canada (2012) Bruce Willis - actor American (2013) Officier des Arts et LettresTim Burton - agaasimaha American, sameeyay iyo qoraa (2010) Elton John - English Fanaanada, laxamiistaha iyo biyaaniiste (1993) Danielle Steel - qoraaga American (2002) Chevalier des Arts et LettresGeorge Clooney - actor American (2007) Paulo Coelho o - Qoraaga reer Brazil (1999) Patrick Demarchelier - Sawirqaade (2007) Viera Ďuricová - Slovak turjumaan film (2015) Julia Kristeva - Qoraaga Franco-Bulgarian (1987) Law Yuudas - actor British (2007) Ester Martinčeková-Šimerová - rinjiile Slovakia iyo scenographer (2001) Sherrill Milnes - kufiicanyahay American (1996) ee Halle - Fanaanada Australia (2008) Peter Molyneux - naqshadeeye British kulan computer (2007)
John Pizzarelli (* 6 Abriil 1960) waa guitarist ka tirsan Maraykanka. Aabbihiis, Bucky Pizzarelli sidoo kale wuxuu ahaa guitarist jazz iyo walaalkiis ka yar jazz Martin Pizzarelli bassist double. Inta lagu jiro xirfaddiisa, oo uu bilawday bilowgii billaha 1980, waxa uu ku siiyay daraasado gaar ah oo uu isagu leeyahay iyo waliba tiro badan oo uu la socdo aabihiis. Intii lagu guda jiray xirfadiisa ciyaareed uu la kaashanaya muusiikaystayaal kale, oo ay ku jiraan, tusaale ahaan, George adhijirrada, Jessica Molaskey, Ray Brown, Buddy DeFranco, Rosemary Clooney ama James Taylor. 2012 ayaa daabacay buugiisa qoraalka ah ee loo yaqaan "World on String": Xusuusin muusik.
Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Golden Globe waa mid ka mid ah Abaalmarinta Dahabka Dahabka ah ee sannadlaha ah ee loo yaqaan 'Hollywood Foreign Press Association' Guuleystaha ugu horeeya ee abaalmarintan waxaa ka mid ahaa George Seaton, oo ku guuleystay 1948 si uu u muujiyo sawirada muusiga filimka New York.
Amal Clooney, gabadhii Alamuddin (* 3 1978. February Beirut) waa qareen British, dhaqdhaqaaqe iyo qoraa, asal ahaan kasoo jeeda dhaqanka sharciga Libanonu.V takhasusay sharciga caalamiga ah, sharciga dembiyada, xuquuqda aadanaha iyo celintiisa. kuwo kale wakiil, aasaasihii Wikileaks Julian Assange ama hore Ra'iisul Wasaaraha Ukraine Yulia Tymoshenko.
Jan Kanyza (* 25 1947. October Lipník) waa film iyo television herec.Život a Czech In 1966 ka qalin jebin dugsiga naxwaha Hejčín, in 1970 uu noqday graduate ah Academy Prague ee Farshaxanka. Wuxuu wax ka bartay jagada Professor Milos Nedbal, wuxuu ka shaqeeyaa goobta rinjiga, taas oo ah xoojin weyn. Waxa kale oo uu soo bandhigay sawirradiisa ku yaal Maraykanka, Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden. Waa qoraaga iyo sawirqaadaha buugag badan oo loogu talagalay carruurta. Ma aha mid aad uwanaagsan in hiwaayad kale waa sawir, taas oo ay u qaadato sida hawlaha farsamada dheeraadka ah.
"Confessions of Mind Hazard" waa riwaayad biopic ah oo ka soo jeeda American-British-German co-production of 2002. Sawirka Charlie Kaufman ayaa ku qoray buug-yaraha isla buugga, George Clooney wuxuu ku soo qoray liiska tiknoolajiyadiisa.
Danny's 2 (12aad ee Badweynta Mareykanka) waa filim dembiile Maraykan ah oo ka socda 2004. Agaasimaha filimka waa Steven Soderbergh. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac iyo Elliott Gould ayaa ku ciyaaray filimka.
Danny's 3 (Afarta Tobnaad) ayaa ah jilaa filim Maraykan ah oo ka socda 2007. Agaasimaha filimka waa Steven Soderbergh. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac iyo Elliott Gould ayaa ku ciyaaray filimka. Kani waa wareega labaad ee kooxda Danny.
Fikradda Fox Mr. Fox waa filimka filimada Mareykanka ee 2009. Agaasimaha filimka waa Wes Anderson. George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray iyo Willem Dafoe ayaa ku ciyaaray filimka.
Abaalmarinta Golden Globe Sanadka ayaa waxaa qabtay 15. Janaayo 2012 ee Beverly Hilton Hotel ee Beverly Hills, Los Angeles. Gala waxaa loo soo bandhigi doonaa markii seddexaad ee joornaalka Britishka iyo actor Ricky Gervais. Ururka Hollywood ee Ururka Saxafiyiinta Dibadda ayaa ku dhawaaqay magacaabista 15. Diisambar 2011.
Batman iyo Robin (Ingiriisiga Batman iyo Robin) ayaa ah filim hawleed oo Mareykan ah oo ka soo jeeda 1997, kaas oo lagu toogtay Joel Schumacher sida ay sheekooyinka qashinka ah ee batman. Dabeecadda cinwaankeedu wuxuu ahaa George Clooney, oo bedelay Vall Kilmer iyo Michael Keaton, oo Batman u ciyaaray filimadii hore. Filimka Maraykanka, filimka miisaaniyaddiisu ahayd 125 malaayiin doolar, ayaa lagu muujiyay 20. June 1997, qaadashada 238 207 122 oo caalami ah. Tani waa koobka afaraad iyo kan ugu dambeeya ee taxanaha filimka Batman 80. iyo 90. duulimaad 20. qarnigii.
Michael Clayton waa riwaayado ka agaasimaha Tony Gilroy 2007 filim American bilowday George Clooney, Tom Wilkinson, TILDA Swinton iyo Sydney Pollack. Filimku wuxuu soo socota qareen maxkamadda Michael Clayton qabsadaan kolegovým leh burburkii kedis ah maskaxda, musuqmaasuqa iyo mu'aamaraad ku saabsan macmiilka weyn ee uu sharciga adag, shirkadda, kuwaas oo la xareeyo tallaabo class ah sababta oo ah saamaynta qaybisa sun ah.